မော်ရင်ဟိုရဲ့ စပါး နည်းပြဘဝ ပထမဆုံး (၃) ပွဲမှာတင် (၃) ပွဲဆက်အနိုင်ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကို အရယူနိုင်မှာလား ?? – Myan Ball
မော်ရင်ဟိုရဲ့ စပါး နည်းပြဘဝ ပထမဆုံး (၃) ပွဲမှာတင် (၃) ပွဲဆက်အနိုင်ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကို အရယူနိုင်မှာလား ??
မော်ရင်ဟို ပြန်လာပါပြီ။ သူကိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပွဲမှာ နှစ်ပွဲနိုင်ခဲ့ပြီး …..
ဒီပွဲကတော့ မော်ရင်ဟိုအတွက် စပါး နည်းပြ ဘဝ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်းပွဲဖြစ်ပြီး အသင်းသစ်နဲ့ ပွဲဦးထွက် (၃) ပွဲလုံး အနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ရပ်ကို ရေးထိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ပွဲမှာ ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ စပါး နောက်ခံလူ ဘင်ဒေးဗီးစ် ဒီပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပြီး လာမယ်လာ၊ လိုရစ်၊ မီချယ်လ်ဗွန်းတို့လည်း ပါဝင်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းမောက် တိုက်စစ်မှူး ဂျိုရှူအာကင်း တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာရနေသလို ဖရေဆာလည်း ဝင်ကစားနိုင်ဖို့ မသေချာတဲ့ အနေအထားပါ။
ဖရန်ဆစ်၊ ဘေးလင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ဖို့ မသေချာပေမယ့် တိုက်စစ်မှူး ဆိုလန်ကီ တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာကနေ အရှင်း ပျောက်ကင်းပြီး ပြန်လာနိုင်ပါပြီ။ မော်ရင်ဟိုရဲ့ စပါး နည်းပြဘဝ အဖွင့် (၂) ပွဲမှာ သွင်းဂိုး (၁၁) ဂိုးအထိ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ကွဲပြားခြားနားတဲ့ မော်ရင်ဟိုကို မြင်ရတော့မှာလား စဉ်းစားစရာပါ။ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာလည်း နောက်တစ်ဆင့်တက်ထားပြီး ဟာရီကိန်း ဂိုးပေါက် ပြန်တွေ့နေတာကလည်း စပါးအသင်းရဲ့ ကောင်းကွက်ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်က ခံစစ်ပိုင်းကလည်း အပေါက်အပြဲများနေတာကို စပါးတို့ ပြုပြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီပွဲမတိုင်ခင် စပါး နည်းပြ မော်ရင်ဟိုက “ကျွန်တော်တို့အတွက် ပွဲဦးထွက် (၂) ပွဲကို အနိုင်ရရှိဖို့ လိုအပ်ခဲ့တာပါ။ လိဂ်မှာ အမှတ်ရဖို့ လိုသလို ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း အရာအားလုံး စိတ်ချရအောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ ရလဒ်တွေပါ။ ဒီအသင်းမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေက ပိုပိုကောင်းလာပြီး ကလပ်အသင်းက ကျွန်တော့်ကို ပေးဆပ်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် အရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်။” လို့ဆိုပါတယ်။
ဘုန်းမောက်အသင်း နည်းပြ အက်ဒီဟောင်းကို ခေါ်ယူဖို့ အဲဗာတန် နဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းတို့က ချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုပြီး ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာ သတင်းတွေ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အက်ဒီဟောင်းက “ကျွန်တော့် အနာဂတ် သတင်းတွေက ဒီပွဲအပေါ် ပြင်ဆင်မှုတွေကို မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ပတ်လုံးလုံး စပါးနဲ့ ကစားမယ့် ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေခဲ့တာပါ။” ဆိုပြီး ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း BBC ရဲ့ ဘောလုံးရုပ်သံ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ လော်ရိုးက “မော်ရင်ဟို ပြန်လာပါပြီ။ သူကိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပွဲမှာ နှစ်ပွဲနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း နိုင်ပွဲဆက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်သီး (၆) သင်းကို ဘုန်းမောက်တို့ ဒုက္ခပေးနိုင်တာမျိုး သိပ်မရှိတော့တာကြောင့် စပါးတို့ ဒီပွဲကို အနိုင်ယူသွားမှာပါ။ စပါး ၂-၀ ဘုန်းမောက်ပါပဲ။” လို့ သုံးသပ်ခန့်မှန်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။